October 1, 2021 - kapurionline
शिवराज सहकारीको छैँठाैँ साधारणसभा सम्पन्न
Posted on October 1, 2021 by कपुरी अनलाइन
राम अवतार चाैधरी । कपिलवस्तुको शिवराज-३, अवस्थित शिवराज कृषि सहकारी संस्थाको छैँठाैँ साधारणसभा सम्पन्न भएकाे छ । उक्त सहकारीको साधारणसभा खरेन्द्रपुर स्थित स्वर्गद्वारी आश्रममा शुक्रबार सम्पन्न भएकाे हाे ।
शिवराज नगरपालिका वडा ३ का अध्यक्ष टेकलाल सापकोटाले साधारणसभा कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै वडालाई कृषिमा अब्बल बनाउन आफू लागि परेको बताए । वडाका कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष सापकोटाले सहकारीले कृषि क्षेत्र धेरै काम गरेकोले अब किसानले उत्पादन गरेका बस्तुलाई सहकारीले खरिद गर्नुपर्ने बताए ।
नगरले तरकारी संकलनको लागि सहकारीलाई जिम्मा दिने तयारी गरेकोले शिवराज सहकारी त्यसको लागि तयार हुनुपर्ने बताए । वडाले प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम राखेकोले आगामी दिनमा समेत निरन्तर गरिरहने जानकारी दिए । कतिपयले अनुदानको लागि मात्र कृषि पेसा गर्ने गरेकोले त्यो अब सम्भव नरहेको सापकाेटाले जिकिर गरे ।
शिवराज नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख ताराचन्द्र चौधरीले उत्पादनको आधारमा स्थानीय तहले अनुदान दिने बताए । यस वर्ष शाखाले शाखाले विभिन्न कृषक सहकारीहरू सँग समन्वयन गरी अनुदान प्रदान गर्ने प्रमुख चाैधरीले जनाए ।
शिवराज नगरपालिका ३ स्वर्गद्वारी मन्दिर परिसरमा भएको कार्यक्रममा सहकारीका अध्यक्ष केरसिंह अदैले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । संस्थाको २०७७-७८ मा ७१ लाख ५१ हजार ९९४ बराबरको काराेबारकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारीले आइएमी सञ्चालन गर्नुको साथै किसानहरूको लागि मल बिक्री वितरण लगायतका कामले कृषकहरूलाई सहज भएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष अदैले सहकारीले चालु आवमा कृषकहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने, तरकारी सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, मल बिउ खरिद गर्ने, सामूहिक खेतीको लागि पहल गर्ने लगायतका योजना अघि सारेकाे उनले बताए ।
Posted in समाचार, स्थानीयLeaveaComment on शिवराज सहकारीको छैँठाैँ साधारणसभा सम्पन्न
शान्ति,सदभावका लागि ई.प्र.का. कृष्णनगर द्वारा सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम सम्पन्न
कपिलवस्तु जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालयको कृष्णनगरको आयोजनामा उद्योग वाणिज्य संघ कृष्णनगरको सभा हलमा सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
Posted in समाचार, स्थानीयLeaveaComment on शान्ति,सदभावका लागि ई.प्र.का. कृष्णनगर द्वारा सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम सम्पन्न
साना उधोगिहरू संगठित हुनुपर्नेमा जोड
नेपाल घरलु तथा साना उधाेग महासंघ शिवराज नगरकाे प्रथम बैठक सम्पन्न भएकाे छ । बैठकमा बाेल्दै साना उधाेगि ब्यवसायिहरू संगठित भए मात्र राज्यले उत्पादन मुखि साना उधागीहरूलाई प्रर्बधनात्मक कार्यक्रमकाे माध्येमबाट सहयाेग पुर्याउने महासंघ जिल्ला अध्यक्ष फुलकुमारी श्रेष्ठले बताउनु भयाे ।
नगरलाई आत्मनिर्भर सबल र सक्षम बनाउन साना उत्पादन मुखि ब्यवासायहरूलाई स्थानिय सरकारले सहयाेग गर्नुपर्ने महासंघकाे जिल्ला बरिष्ट उपाध्यक्ष टाेपलाल पाेख्रेलले जाेड दिनुभयाे ।
शिवराज नगरका सम्पुर्ण साना उधाेगी तथा ब्यवासायीहरूले आफ्नाे ब्यवसाय नगरपालिकाकाे कार्यालयमा सुचिकृत अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउदै नगर भित्र भएका साना उधाेग तथा ब्यवसायहरूकाे लगतकाे आधारमा प्रभावकारी याेजनाहरू निर्माण गर्न मद्धत पुग्ने
शिवराज नगरपालिकाकाे उधाेग तथा ब्यवसायी शाखा प्रमुख नारायण पंगेनीले बताउनु भयाे ।
बैठक नेपाल घरलु तथा साना उधाेग महासंघ शिवराज नगर समिति अध्यक्ष संजिव गहतराजकाे अध्यक्षता र काेषाध्यक्ष ऋषिकेश बि.ककाे संचालनमा सम्पन्न भएकाे थियाे ।
Posted in समाचारLeaveaComment on साना उधोगिहरू संगठित हुनुपर्नेमा जोड